Ninkan beeraley ah oo Ra’iisul wasare ka Noqon doono Japan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ninkan beeraley ah oo Ra’iisul wasare ka Noqon doono Japan
Ninkan beeraley ah oo Ra’iisul wasare ka Noqon doono Japan
Waxaa 1948 dhalay qoys beeralay ah oo tabcada miraha strawberry-ga, Yoshihide Suga, ayaa dallacaaddiisa waxa ay aheyd mid isu dheeli-tiran oo ka soocaysa xulka siyaasadda ee mudada dheer garwadeenka ka ahaa siyaasadda Japan.
Safarkiisa siyaasadda waxa uu soo bilowday markii uu ka shaqeeyay olole doorasho baarlamaan waxyar uun kaddib markii uu ka qalinjabiyay Jaamacadda Hosei ee Tokyo.
Markii dambe waxa uu xoghayn u noqday xildhibaan ka tirsan Xisbiga Liberal Democratic Party (LDP), ka hor inta uusan u dhaqaaqin xirfaddiisa siyaasadeed.
Waxaa 1987 loo doortay inuu xubin ka noqdo Golaha Magaalada Yokohama, 1996-diina waxaa markii ugu horraysay loo doortay golaha Cunnada ee Japan.
2005, Ra’iisul Wasaare Junichiro Koizumi ayaa waxa uu ka dhigay wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo warbaahinta.
Sanadkii xigay, markii Mr Koizumi uu xilka ku wareejiyay Shinzo Abe, ayaa Suga waxaa loo dallacsiiyay inuu wasiir ka noqdo saddex wasaaradood, xilkaas oo uu hayay illaa 2007.
Xiriirka kala dhaxeeyay Mr Abe ayaa sii scodai markii markii dambe uu xilka ra’iisul wasaaraha ku soo laabtay 2012, markaas oo uu magacaabay xilka awoodda badan ee Xoghayaha Golaha Wasiirrada.
Siddeedii sanadood ee la soo dhaafay, “gacanta midig” ee Mr Abe ayaa saaxadda saarnaa oo waxa uu maalintiiba laba jeer warbaahinta siin jiray xogta dalka waxa uuna magac ku sameeyay maamulidda hannaanka maamul ee culus ee dalka Japan.
Maadaama uu ahaa wajiga maamulka, waxaa mas’uul looga dhigay inuu daahfuro boqortooyada cusub sanadkii 2019, markaas oo uu xaqiijiyay in Boqor Akihito uu xilka ka degayo.
Maamulka cusub ee uu hogaamin doono Boqor Naruhito ayaa waxaa loogu yeeri doonaa Reiwa – taas oo macnaheedu yahay “Is-afgaradka wanaagsa” – ayuu Mr Suga ku dhawaaqay, arrintaas oo horseedday in loo bixiyo naanaysta ah “Adeer Reiwa”.
Previous articleXildhibaan Mahad Salaad ” heshiis kasta oo farmaajo la la gaaro Filinteeda waa wax la sugayo waqti Badan
Next articleMUCAARADKII DOWLADDA OO KADABA GUURAY KHAYRE,
Qaar kamid ah wax garad ka soo Jeeda Galmudug ee Dagta Itoobiya oo lagu xirey Shilaabo Sawiro
Golaha shacabka oo goor dhow si aqlabiyad leh ku ansixiyey Ra’iisul wasaaraha Cusub
Qarax xooggan oo ka dhacay Lubnaan iyo bakhaarkii hubka ee ururka Xisbullaahi oo gubtay
Qoor Qoor iyo Ahmed Madoobe oo lagu soo dhaweeyey Garoowe